Kujekeswa 0.21.7 - Yakaburitswa pamwe nekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Kune akawanda mamiriro edesktop yemahara mashandiro ekushanda, sekuziva kwedu tese, kunyanya kuGNU / Linux, kunyangwe mamwe acho achienderana nemamwe masisitimu akadai seFreeBSD, Solaris, nemamwe maBSD, nezvimwe. Iye zvino tave kuunzwa neshanduro nyowani yeinozivikanwa Enlightenment (kana kungoti E sezvinozivikanwawo), iyo minimalist inogadziriswa kwazvo windows maneja, iyo sezita rayo inoratidza inzvimbo yakajeka yakajeka kuitira kuti isapedze zviwanikwa zvakawandisa. uye kuiswa mumapoka ane mashoma kana anopfuura zviwanikwa zvekutanga.
Chiedza hachizivikanwe sedzimwe nharaunda, asi chokwadi ndechekuti hazvizivikanwe semamwe mapurojekiti, nekuti vazhinji vanoishandisa. Uye vese zvavo vanofara kuti iyi vhezheni itsva yasvika, iyo Kujekeswa 0.21.7 iyo inouya neanenge makumi mashanu nemashanu bugs akagadziriswa, kugadzirisa kweWayland graphic server uye mamwe mashandiro ayo vagadziri veprojekiti awana uye kuti izvozvi mese munogona kunakidzwa kana mukagadzirisa ...
Simon lee, mumwe wevagadziri veiyo Enlightenment projekiti, anga ari mutariri wekuzivisa vhiki rino rapfuura kuwanikwa kweshanduro kune vese vanoda kuyedza. Uku kumwe kuburitswa kutsva kwebazi rakagadzikana re0.21 rekuvandudza ruzivo rwevashandisi narwo. Pakati pekuvandudzwa, hapana chete izvo makumi mashanu neshanu zvakagadziriswa zvikanganiso, asi zvakare zvimwe zvinonakidza shanduko zvine chekuita nekushandisa kwayo uye kutaridzika kutaridzika, sezvazvinowanzoitika mukugadzirisa.
Semuenzaniso, maneja wefaira, madingindira, xsettings, munyori, zviziviso, PulseAudio musanganisi, uye mamwe ma module akagadziridzwa. Zvimwechetezvo, zvimwe zvinhu zvine chekuita ne manejimendi zviwanikwa zvehurdware zvakagadziridzwa kuti zvinyatsoita, uye nekuvandudza kwambotaurwa kutsigira Wayland. Saka kana iwe uchida kuitora, unogona kuzviita mu webhusaiti yepamutemo yeprojekti, kwaunowana zvakare rumwe ruzivo nezve iyi software uye rubatsiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Kujekeswa 0.21.7 - Yakaburitswa pamwe nekuvandudzwa